खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरुको कोरोनाका कारण भिसाको म्याद सकियो ? यसो गर्नुस ! - Himali Patrika
खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरुको कोरोनाका कारण भिसाको म्याद सकियो ? यसो गर्नुस !
हिमाली पत्रिका १ बैशाख २०७७, 8:56 am
– बिदामा घर आएका बेला उडान बन्द भयो । काममा फर्कन नपाउँदै भिसा सकिन लागेको छ भने आफ्नो रोजगारदातालाई खबर गर्नुहोस् ।
– तपाईँको उपस्थिति नभए पनि रोजगारदाताले कुवेतको भिसाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
– भिसा नवीकरणका लागि रोजगारदाता कम्पनीले www.moi.gov.kw मा गई युजर नेम बनाई कुवेतको आवासीय भिसा नवीकरण गरिदिनेछन् । बरु यो जानकारी तपाईँ आफैं रोजगारदातालाई दिनुहोस् ।
– तपाईँ कुवेतमै हुनुहुन्छ र भिसा सकिन लागेको छ । तर कोरोना भाइरसका कारण नवीकरण भएको छैन भने आफ्नो रोजगारदातालाई भन्नुुहोस् । रोजगारदाता कम्पनी वा व्यवस्थापकले www.moi.gov.kw मा युजरनेम बनाई अनलाइनबाटै भिसा नवीकरण गरिदिनेछन् ।
– काम गर्ने भिसा – १८ र घरेलु श्रमिक भिसा– २० दुवै खालको भिसा यही प्रक्रियामार्फत नवीकरण गर्न सकिन्छ ।
– यूएईको भिसा सकिएको छ भने अब नआत्तिनुहोस् । यूएईले मार्च १ भन्दापछि यूएईको आवासीय भिसा सकिएकालाई निःशुल्क तीन महिना थपिदिने भएको छ ।
– यूएई घुम्न जानुभएको थियो तर कोरोनाको जोखिमका कारण स्वदेश फर्कन पाउनुभएको छैन भने पनि भिसा थप गर्न पाउनुहुनेछ ।
– भिजिट या टुरिस्ट भिसामा यूएई गएकाले त्यहाँको कानुन अनुसार कुनै पनि टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सीमार्फत भिसा थप गर्न सकिन्छ ।
– तर यो अबधिमा जसले आफ्नो भिसा थप्दैनन् । उनीहरुले प्रत्येक दिनको ओभरस्टे वापतको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । भिसा अवधिभन्दा बढी अथवा ओभरस्टे भएर बसेमा प्रत्येक दिन बराबर दुई सय दिर्हाम जरिबाना लाग्नेछ ।
– घर फर्कन टिकट काटिसक्नु भएको थियो, तर कोरोनाका कारण उडान रद्द हुँदा घर फर्कन पाउनुभएन र त्यहीँ अड्किनु परेको छ भने दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोस् । बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासले नै यस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।
– मलेसियाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि १८ मार्चदेखि १४ अप्रिलसम्म लकडाउन गरेकाले यो अबधीमा नेपाल फर्कन नपाएका र भिसा सकिएका नेपाली नागरिकले दूतावासमा अप्रिल २ अर्थात स्थानीय समय अनुसार बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म जानकारी गराउन दूतावासले भनेको छ ।
– जानकारीका लागि अनलाइमार्फत पनि आवेदन भर्न सकिने दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
– अनलाइनमार्फत आवेदन भर्न नसक्नेले ६०१६२४७२७७७ मा ह्वाट्स्एअप मार्फत आफ्नो विवरण पठाउन सकिन्छ । पासपोर्टमा उल्लेख भएको आफ्नो नाम, पासपोर्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर, मलेसियन भिसाको किसिम र मलेसियामा कार्यरत भए कम्पनीको नाम र फोन नम्बरसहित लेखी पठाउनु पर्नेछ ।